BAO TSY MIVILY	Miverena Karama vaty masaka(0)Nisy dia nisy tokoa ireo nimenomenona ho tsy nahazo vola teny Ankorondrano Andrefana nandritra ilay hetsika famoriam-bahoaka ho fanoherana ny hevitry ny iraisam-pirenena ny amin’ny tokony hisintahana kandidà telo amin’ny fifidianana filoham-pirenena. Raha ny voalazan’izy ireo dia nisy olona nitaona azy ireo teny amin’ny fokontany hanao io hetsika io ary hisy vola ho tambin’izany. Ny tsy voamarina dia ireo olona nanao an’izay karazana « fanjoana olona » izay. Tsy zava-baovao teto amintsika io ary saika efa nampiasa an’io fomba io avokoa izay nandalo teo amin’ny fitondrana.
Tsy nisy zavatra niova tamin’ny fanaovana politika teto Madagasikara efa am-polo taonany maro izao. Tsy mahagaga raha misongadina ho azy izay manam-bola. Maro loatra koa mantsy ireo mpirangorango efa manaiky amin’ny fony manontolo ny hatao fitaovana, sitrany hahay aloha vaza-mihetsika…
Malaza ratsy(0)Tafiditra ho laharana fahafito amin’ireo firenena folo maneran-tany voasokajy ho manana mponina mitaintaina fatratra indrindra noho ny tsy fandriampahalemana i Madagasikara, raha ny fanadihadiana nataona tranon-kalam-pifandraisana vahiny iray. Na i Afghanistan aza dia mbola ao aoriantsika, araka ity filaharana ity. Saika zavatra ratsy sy mamohehatra hatrany no hisongadinan’i Gasikara tato ho ato. Tsy kisendrasendra mihitsy ny hoe nanomboka tamin’ny taona 2009 no nankaty dia vao mainka nihanitombo ny tsy fandriampahalemana. Tsy maharesy lahatra intsony ilay filazan’ireo be bokotra fa basy niparitaka nandritra ireo krizy tany aloha no nampiasain’ny jiolahy. Misy amin’ ireo natao ho mpiaro ny vahoaka sy ny fananany mihitsy no mandroba. Hatramina olom-boatendry hanao lalàna aza moa voatonontonona amina fanakanan-dalana. Izay tetezamita mampiroborobo ny asan-jiolahy izay no mbola misy maniry fatratra ny hitohizany. Tsy saro-karohana fa miavaka eny foana ireo mahita tombontsoa amin’izany.